xayiran iPhone in hab kabashada! Ka waxaa xalin 1 click n
Marka la isticmaalayo iPhone ah, somtimes aad la kulmi doonaa xaalado aad u baahan tahay in aad iPhone in Recovery Mode si ay u xaliyaan dhibaatooyinka. Si kastaba ha ahaatee, ugu Dhanka kale, mararka qaarkood, waxaad leedahay si uu u xaliyo kabashada loop iPhone ama aad u hesho iPhone ka mid ah Recovery Mode si ay u shaqaysaa si caadi ah ka dhigaan. Haddii aadan familar sida ku soo kabashada Mode qortid iPhone galay Recovery Mode ama heli iPhone, ha ka welwelin. Ka dib markii akhriska warbixinta soo socota, waxaad qaban doonaa si sahlan. Dhammaan macluumaadka hoos ku xusan waa in appliable iPhone 3G oo lagu daydo ka dib, oo ay ku jiraan iPhone 6s (Plus) iyo iPhone 6 (Plus).
Qaybta 1aad: Sida loo saar iPhone galay Recovery Mode in 2 Talaabada Simple
Qeybta 2: Hel iPhone ka mid ah Recovery Mode aan celinta iPhone (LUMISTA XOGTA MAYA)
Qeybta 3: U dayactir "iPhone xayiran Recovery Mode" by celinta iPhone la Lugood (XOGTA WAAYI KARO)
Qaybta 1aad: Sida loo saar iPhone galay Recovery Mode
Tallaabada 1. Isku aad iPhone in kombiyuutarka, oo ay maamulaan Lugood.
Tallaabada 2. Riix badhanka Home iyo batoonka aad iPhone waqti isku mid ah. Marka aad aragto logo Apple muuqashada, sii daayo button Power iyo sii riixaya badhanka Home ilaa aad ka hesho heegan Lugood ah leh aad iPhone waa in hab-kabashada. Waxaad arki doonaa shaashadda ku qoran aad iPhone.
Video Tutorial: sida loo dhigay iPhone galay Recovery Mode
Qeybta 2: Hel iPhone ka mid ah Recovery Mode aan celinta Your iPhone
Jidka kaliya ee rasmiga ah si aad u hesho iPhone ka mid ah Recovery Mode waa in la soo celiyo aad iPhone la Lugood. Si kastaba ha ahaatee, sidan masixi doono dhammaan macluumaadka iyo content aad iPhone, iyagoo sababaya maqal la'aan data. Mararka qaarkood, xitaa aad isku daydo inaad baxdo Recovery Mode ay dib u soo celinta aad iPhone la Lugood, waxaad weli u wajihi doonaa dib u soo celinta khaladaad. Dhab ahaantii, ma aha in ay adag tahay in xal u helidda dhibaatada. Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa Wondershare Dr.Fone ee macruufka, kaas oo kaa caawin doona inaad u xaliyaan dhammaan dhibaatooyinka aad la kulmi halka in aad iPhone ka mid ah Recovery Mode. Fiiri faahfaahintan soo socota.
2 Talaabada Sahlan ee Hel iPhone ka mid ah Recovery Mode aan Loss Data
Marka aad aragto 'xidhmaan Lugood' digniin ku saabsan iPhone, aad marka hore isku daydaa inaad 2 talaabooyin fudud si aad u hesho iPhone ka mid ah Recovery Mode.
Tallaabada 1. Download Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) oo ku xidh on your computer.
Tallaabada 2. Isku aad iPhone in kombiyuutarka la cable USB ah. Markaas ordi Wondershare Dr.Fone ee macruufka. Waxaad arki doonaa in barnaamijka lagu ogaadaa aad iPhone, iyagoo leh ma aha in hab caadi ah. Si fudud guji "Guuleysatey qalabka" badhanka si aad u hesho iPhone caadi ah dib u. Waa quruxsan fudud.
U dayactir Khaladaadka aad kaga baxdid Recovery Mode
"Markii aan isku dayay in ay ku xidhmaan aan iPhone la PC iyo fuliyay habka iPhone soo celinta, Lugood ku daray inuu soo saaro software ah laakiin markii la dhameeyo soo saarista baan ka heli fariin qalad ah ii sheegin 'iPhone ayaa laga yaabaa in aan la soo celin. Baadi aan la garaneynin ayaa dhacay" Waxaan isku dayay dhowr jeer oo aad si sax ah baadi isku mid ah mar walba "
Haddii aad la kulmi qalad wuu soo celiyaa, markaas waa inaad isku daydaa ah "System Operating Repair" on Dr.Fone ee macruufka si uu u xaliyo hesho iPhone ka mid ah Recovery Mode. The qaladaad soo celinta dhici inta badan, sababtoo ah nidaamka qalliinka aad iPhone si aan caadi ahayn u qabata. Guji "System Operating Repair" furmo suuqa ugu weyn ee Dr.Fone ee macruufka iyo samayn waxa aad ku samayn si uu u xaliyo nidaamka qalliinka sheegayaa. Haddii ay si guul leh u xaliyo nidaamka qalliinka, waxaa kuu sheegayaa doono. Ka dib markaas, waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay sugaan aad iPhone guuleysatey.
Qeybta 3: U dayactir "iPhone xayiran Recovery Mode" la Lugood
Xaaladaha intooda badan, waxaad ka heli kartaa iPhone ka mid ah Ladnaansho loop via Lugood. Waxaad u isticmaali kartaa in la soo celiyo aad iPhone in goobaha ay asal ah si fudud oo si deg deg ah. By jidkii, dhibaatooyinka telefoonka badan ayaa loo hagaajin karaa iyadoo la soo celinta in goobaha warshad ama soo celin la Lugood ama gurmad iCloud.
Connect aad iPhone la cable USB in kombiyuutarka ah, oo ay maamulaan Lugood. Marka Lugood ogaadaa aad iPhone, waxay ku siin doonaa fariin leh in aad iPhone waa in hab-kabashada iyo aad u baahan tahay si ay u soo celiyaan. Just guji si ay u soo celiyaan. Taasi waa ok.
Haddii aad ee aan helin farriinta ah, fadlan tamarta off aad iPhone. Just sii button Power ilaa shaashadda gudcur bay ahayd haddii aad u ma aan samayn karo in saxaafadda way.Then dhaqanka button Home ee wajiga ka mid ah qalabka ku. Marka telefoonka waa, sii riixaya badhanka Home ilaa Lugood booda fariinta.
Fiiro gaar ah: ka hor inta aadan samayn waxa kor lagu soo sheegay, fadlan gurmad aad iPhone in Lugood aad. Wax walba oo aad iPhone la masixi doono halka qabanayaan si ay ugu soo celiyaan. Haddii aad sameeyey gurmad ah ee aad iPhone hore, markaas ka dib waxaad u soo celin kartaa iPhone kaga imaanayo Lugood faylka.
> Resource > iPhone > 2 daqiiqo in aad iPhone ama ka bax Recovery Mode